MUUQAAL: Donald Trump oo Luuqad adag uga hadlay Kooxo Cadaan ah oo Rabshado ka dhigay gobolka Virginia | Entertainment and News Site
Home » News » MUUQAAL: Donald Trump oo Luuqad adag uga hadlay Kooxo Cadaan ah oo Rabshado ka dhigay gobolka Virginia
MUUQAAL: Donald Trump oo Luuqad adag uga hadlay Kooxo Cadaan ah oo Rabshado ka dhigay gobolka Virginia
daajis.com:- Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa marki ugu horreysay Isniinti si rasmi ah u cambaareeyey kooxaha ay la weyntahay caddaanimada ee dhawaan rabshadaha ka sameeyey magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia.
Hadalka madaxweyne Turmp ayaa yimid kadib marki ay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha xisbiyada Jamhuuriyga iyo dimoqraadigaku cambaareeyeen inuusan si toos ah u dhaleeceyn kooxaha caddaanka xagjirka ah ee mudaaharaadka qalalaasaha watay ka dhigay Virginia.
Trump ayaa carrabaabay sadex koox oo kala Naaziyiinta Cusub, Ku Klux Klan (KKK) iyo white supremacists. Wuxuu ku tilmaamay inay yihiin danbiilayaal qaswadayaal ah oo ku ciyaaray qiimaha Mareykanka.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA MADAXWAYNE TRUMP
Trump ayaa ballan qaaday in maxkamad lasoo taagi doono kooxihi ka danbeeyey rabshadihi dhiiga ku daatay ee Sabtidii ka dhacay magaalada Charlettsvile.
“Waaxda caddaalada waxay furtay baaritaan xuquuqda madaniga ah oo ku saabsan weerarki baabuur ee lagu dilay qof rayid Mareykan ah laguna dhaawacay 20 kale. Qof walbaa oo ku lug lahaa faldanbiyeedki dhamaadki todobaadki hore ogow waa lagula xisaabtami doonaa, caddaaladda ayaana shaqeyn doonta.”
Halqof oo rayid ah ayaa ku dhintay 19 kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib marki nin lagu magacaabo James Alex Fields Jr uu si ulakac ah u jiirsiiyey baabuur uu watay kooxo iska soo horjeeday oo Sabtidi hore ku mudaaharaadayey magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia.
Arrintaasi ayaa caro weyn ka dhalisay siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka Mareykanka.